12:00 am - Sunday October 22, 2017
Home » Wararka » Maamulka Puntland oo War murtiyeed ka soo saaray shirka Kismaayo
Maamul goboleedka Puntland ayaa shaaciyay inay ka qeybgalayaan shirka uu ku baaqay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe inuu ka furmayo maalinta Axada magaalada Kismaayo.
Kulan ay isugu yimaadeen maanta golaha wasiirada Maamul goboleedka Puntland laguna qabtay magaalada Boosaaso ayaa warmurtiyeed laga soo saaray lagu sheegay in dowladda Puntland ay si buuxda uga qayb-qaadan doonto shirka Kismaayo.
Go’aanka golaha wasiirada Puntland ayaa ah mid ka soo horjeeda fikirka uu Madaxweyne ku xigeenka Puntland C/xakiin Camey ka qabo shirka Kismaayo isagoo ku tilmaamay shirka mid aan maslaxad u aheyn umadda Soomaaliyeed, waxana uu ku baaqay in shirka dib loo dhigo, waxaana uu talo ahaan u soo jeediyay in sidii awal Muqdisho la isugu tagi jiray la isugu tago.
Shirka oo lagu waday in Todobaadkan uu furmo ayaa arrimo farsamo iyo xaalado siyaasadeed uu dib ugu dhacay, markii qaar ka mid maamul goboleedyada ay shaki geliyeen.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa horay ugu baaqay shirka, isagoo ku casuumay madaxda maamul goboleedyada inay ka soo qeyb galaan, si ay uga wada hadlaan xal u raadinta Khilaafka Dowlad Goboleedyada qaar iyo Dowlada Dhexe.
Halkan ka aqriso War Murtiyeedka Punltand ay ka soo saartay shirka Kismaayo;